Vaovao - fironana fampandrosoana telo amin'ny fampiharana ny fibre karbaona thermoplastic
Miaraka amin'ny fanitarana tsy tapaka ny tsenan'ny fangatahana, ny fitambaran'ny fibre karbaona misy thermosetting dia mampiseho ny fetrany manokana, izay tsy afaka mahafeno tanteraka ny filan'ny fampiharana avo lenta amin'ny lafiny fanoherana ny fitafiana sy ny fanoherana ny hafanana avo. Amin'ity tranga ity dia miakatra tsikelikely ny satan'ny fitambaran'ny fibre karbaona thermoplastic izay lasa hery vaovao misy fitambarana mandroso. Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny haitao fibre karbaona sinoa dia nanao fampandrosoana haingana, ary ny teknolojia fampiharana ny fitambarana fibre karbaona thermoplastic dia nampiroborobo kokoa ihany koa.
Amin'ny fitrandrahana ny fibre karbona mitohy thermoplastic nohamafisina mialoha ny fizarana telo, ny fironana telo amin'ny fampiharana ny fibre carbon thermoplastic dia aseho miharihary
1. Avy amin'ny vovoka karbaona vovoka nohamafisina ho an'ny fibre karbonika mitohy
Ny fitambaran'ny fibre karbôna dia azo zaraina ho vovoka karbaona vovoka, fibre karbaona voatetika, fibre karbaona mitohy tsy mitongilana ary fanamafisana ny fibre karbonina. Arakaraky ny halavan'ny fibre nohamafisina no manome ny angovo bebe kokoa amin'ny enta-mavesatra ampiharina, ary ny avo kokoa amin'ny tanjaka ankapobeny amin'ny fitambarana. Noho izany, raha oharina amin'ny vovoka na kofehy karbônina voatetika fanamafisana thermoplastic fitambarana, mitohy fibre karbonina nohamafisin'ny thermoplastic dia manana tombony tsara kokoa. Ny dingan'ny famolavolana tsindrona be mpampiasa indrindra any Shina dia ny vovoka na fibre karbaona voatetika nohamafisina. Ny fahombiazan'ny vokatra dia misy fetra voafetra. Rehefa ampiasaina ny fibre karbonina mitohy, ny fitambaran'ny fibre carbon thermoplastic dia hampiditra amin'ny habaka fampiharana malalaka kokoa.
2. Ny fivoarana manomboka amin'ny resina thermoplastic farany ambany ka hatramin'ny matrix resin thermoplastic farany ambany
Ny matrix resin thermoplastic dia mampiseho viscosity avo lenta mandritra ny dingam-pandehanana, izay sarotra ny manaparitaka tanteraka ireo fitaovana fibre carbon, ary ny ambaratongan'ny fidirana dia mifandray akaiky amin'ny fanatanterahana ny prepreg. Mba hanatsarana bebe kokoa ny maha-afaka, ny teknolojia fanovana mitambatra no noraisina, ary nohatsaraina ny fitaovana fanaparitahana fibre tany am-boalohany sy ny fitaovana fitrandrahana resin. Raha manitatra ny sakan'ny kofehin'ny fibre karbonika dia nitombo ny habetsahan'ny resina mitohy. Ny fahamendrehana ny resina thermoplastic amin'ny haben'ny fibre carbon dia mazava ho azy fa nihatsara, ary ny fahombiazan'ny prepreg thermoplastic nohamafisin'ny fibre carbon dia azo antoka. Ny matroka resin ny fitambaran'ny thermoplastic fibre karbonika dia nahitatra soa aman-tsara avy tany PPS sy PA ka hatramin'ny PI sy ny peek.
3. Avy amin'ny laboratoara namboarina tanana hatramin'ny famokarana betsaka
Manomboka amin'ny fahombiazan'ny andrana kely amin'ny laboratoara ka hatramin'ny famokarana marobe ao amin'ny atrikasa, ny lakile dia ny famolavolana sy ny fanitsiana ireo fitaovam-pamokarana. Ny prepreg thermoplastic nohamafisin'ny fibre karbaona dia afaka mamokatra famokarana betsaka tsy miankina amin'ny salanisa isan'andro fotsiny, fa koa amin'ny kalitaon'ny prepreg, izany hoe raha azo fehezina ny votoatin'ny resina ao amin'ny prepreg ary mety ny ampahany, raha ny fibre karbaona ao amin'ny prepreg dia zaraina mitovy ary miditra an-tsokosoko tanteraka, ary na malama ny tampon'ny prepreg ary marina ny habeny.